Saraakiil Dib Loogu Soo Celinayo Muqdisho Kadib Markii Lagu Xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kadib markii shalay gelinkii dambe Magaalada Kismaayo oo Xarun KMG u ah maamulka Jubbaland gaar ahaan Garoonka Diyaaradaha Ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugida Jubbaland ay ku xireen Taliyihii Hay’adda nabadsugida Jubbaland iyo ku xigeenkiisa ay dowladda Soomaaliya u Magacaawday xilkaas.
Saraakiisha lagu xiray Garoonka Diyaaradaha Kismaayoa ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cali Mire Ducaale oo ah Taliyaha iyo ku xigeenkiisa Maxamed Ibraahim,iyadoona saraakiisha Nabadsugida Jubbaland ay sheegeen in loo xiray Taliyeyaashaan falal amniga.
Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda labadan Sarkaal dib loogu soo celiyo Magaalada Muqdisho oo markii hore ay ka baxeyn,sida ay sheegeen saraakiisha Nabadsugida Jubbaland.
Ilaa iyo hada majiro wax war ah oo kasoo baxay Wasaarada amniga dowladda Federaalka Soomaaaliya ee ku aadan xariga Saraakiisha lagu xirey Garoonka Diyaaradaha Magaalada Kismaayo.
Akhri:-Gabar Somali Ah Oo Ku Guuleysatay Doorasho Ka Dhacday Mareykanka